၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၇၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ပေးပို့ခဲ့သည့် သဝဏ်လွှာတွင် "ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစိုးရရဲ့ အဓိကဦးစားပေး လုပ်ငန်းကြီး တစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်လို့ မဖြစ်မနေအောင်မြင်အောင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်" ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပြီး ပင်လုံမြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် (၇၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က "နိုင်ငံအတွက် အသက်တမျှ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို စုပေါင်းအားနဲ့ ရယူသွားကြဖို့" လမ်းညွှန် မြွက်ကြားထားသည်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အုတ်မြစ် အီလက်ထရောနစ် အစိုးရစနစ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ(အိုင်စီတီ)က လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာကို ဗဟိုပြု၍ အီလက်ထရောနစ်အစိုးရ (e- Government)ကို အကောင်အထည်ဖော် နိုင်မှသာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(JICM) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ (NCA-S EAO)၏ နှစ်ဖက်အလုပ်အဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေလီလမ်းရှိ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) တွင် ဆက်လက် ကျင်းပသည်။
Vol.VI, No. 307, Tuesday, 18 February 2020
Publisher : New Light
Vol.VI, No. 306, Monday, 17 February 2020
Vol.VI, No. 304, Saturday, 15 February 2020